Umbala njani wokuzoba ngeFotohop ngokukhawuleza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umbala njani wokuzoba ngeFotohop ngokukhawuleza
Njani fakela umbala kumfanekiso Photoshop ngokukhawuleza nangokulula ukufezekisa isiphumo esinyulu isitayile somntwana ngaphandle kwesidingo sokuya kwizinto zobugcisa ngaphakathi Photoshop kodwa ngokunika ubomi kwimizekelo yethu indlela elula kakhulu.
Funda iikhonsepthi ezisisiseko ukubonisa kuzo Photoshop ukufezekisa ngokukhawuleza iziphumo eziqaqambe kakhulu eziya kuthi zibonise yonke loo mizekeliso uyizobileyo ngesandla kwaye ufuna ukuyinika umbala kuyo Photoshop.
Kule nto isikhundla siya kufunda uku Faka imibala ngokulula kwimizobo yethu kwaye kulula, ukulinganisa umzobo wabantwana abancinci ngokulula kwayo kunye ukungabikho kweenkcukacha zobugcisa ezihambele phambili.
Siya ku umbala kwi Photoshop kwimizobo yethu ngeendlela ezimbini:
Ukunika umbala ngaphandle kokucima imvelaphi ukupeyinta ngesandla
Ukunika umbala ngokususa imvelaphi kunye Ukukhetha iinxalenye yomzobo
Siza kufunda iindlela ezimbini zokufaka imibala kwimizobo yethu kwi-Photoshop, ezi iindlela ezimbini inokuba luncedo kakhulu xa sisebenza kunye imizekeliso ehambele phambili kwi Photoshop.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile yenza umaleko omtsha en Photoshop kwaye utshintshe imowudi yomaleko ukusuka kwesiqhelo ukuphindaphindeka. Sibeka umaleko wombala ngaphezulu kwaye siqale ukupeyinta kuwo, siza kubona ukuba nangona umzobo wethu unelayini emnyama umbala uhlala ungaphantsi komgca.
Siyaqhubeka nokufaka umbala kulo lonke umzekeliso ngokwenza maleko ahlukeneyo omlinganiswa ngamnye (ukuba ngaphezulu kwesinye) ye tngaloo ndlela usebenze ngokukhululeka nangocwangco.
IPodemos nika izithunzi kunye nezibane kumzobo wethu ukuba senza izaleko ezintsha kwaye ukhethe imibala ekhanyayo kunye emnyama. Ukwenza oku kufuneka nje thatha isampulu yombala wethu isiseko ngokucinezela isitshixo se-alt ngesixhobo sebrashi esikhethiweyo.
Indlela elandelayo yokufaka umbala kumzobo yile Sula imvelaphi emhlophe ukukhetha kamva iinxalenye zomzobo ngokwahlukeneyo.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukukhetha ifayile isixhobo somlingo wand kwaye uqale yenza ukhetho kumzobo, Kufuneka ukuba sikhethe umaleko wokuqala womzobo.
sikhetha imvelaphi emhlophe ngesixhobo se-wand wand
Sisusa imvelaphi kancinci kancinci
Sikhetha iinxalenye zomzobo saqala sayifaka imibala
Ukufaka umbala kumzobo kufuneka khetha iindawo ngokwahlukeneyo Kwaye ngesixhobo sebrashi esiya kukunika umbala ngesandla kumzobo wethu.
Kancinci sikhetha indawo nganye kumzobo wethu, sinokwenza umaleko omtsha sebenza ngokwahlukeneyo onke amalungu omzekeliso. Ukuba umzobo wethu unezinto ezininzi kufanelekile ukuba usebenze ngokwahlukeneyo kuwo maleko ecocekileyo nangamagama asincedayo ukuba sizimise ngokwethu.
Kuphela apha isikhundla esisiseko ngendlela yokufaka imibala kwimizobo yethu Photoshop. Kancinci kancinci siza kubona iindlela eziphambili ngakumbi ukuqala ukufunda nokuphucula imifanekiso yethu yedijithali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Umbala njani wokuzoba ngeFotohop ngokukhawuleza
"Umbuzo wombala" ngeFotohop.
Uyenza njani i-watermark ngePhotohop